Maalgelinta dalxiiska ee kobcinta Zhanjiang, Shiinaha |
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » News » Maalgashiga dalxiiska ee kobcaya Zhanjiang, Shiinaha
Maalgashiga dalxiiska ee kobcaya Zhanjiang, Shiinaha
Zhanjiang wuxuu ku soo dhaweynayaa maalgashiga dalxiiska ee ka socda Hong Kong shirkadeeda dalxiiska ee xiisaha leh, taas oo la filayo inay kor u kacdo sanadka 2016 ka dib marka ay soo hagaagaan xarumaha gaadiidka magaalada, oo ah magaalo ugu sareysa
Zhanjiang waxay soo dhaweyneysaa maalgashiga dalxiiska ee ka socda Hong Kong shirkadeeda dalxiiska ee rajada leh, taas oo la filayo inay kor u kacdo sanadka 2016 ka dib marka ay soo hagaagaan goobaha gaadiidka ee magaalada, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan magaalada.
"Dekedda ku taal galbeedka gobolka Guangdong waxaa lagu maneystaa kheyraad badeed, deegaan, taariikh iyo dhaqan, cimilo iyo shaqaale," ayuu yiri Zhuang Xiaodong, oo ah ku-xigeenka duqa magaalada, isagoo soo koobaya faa'iidooyinka Zhanjiang ee horumarinta dalxiiska.
Xeebta magaaladu waxay dheereysaa 2,023.6 kilomitir, waxayna hoy u tahay 122 jasiiradood oo aan la deggeneyn, taasoo dalxiisayaasha siisa aragtiyo ballaadhan oo xasilloon.
Dhismaha Leizhou Peninsula, oo ka mid ah saddexda gacmood ee ugu waaweyn dalka, wuxuu u eg yahay rinjiyeynta muuqaalka dhirta muuska dahabka ah iyo bad ka sameysan bakoorad sonkor ah oo cagaaran.
Dhaqanka Mazu wuxuu ku dhex milmay dhaqanka Gaozhou ee Zhanjiang, waxayna labaduba bixiyaan soojiidasho dhaqameed oo gaar ah, sida eeyaha dhagxan xardhan iyo qoob ka ciyaarka masduulaaga.
Dalxiiska la filayo ayaa ku soo kordhay fursad maalgashi
Waxay jiiftaa koonfurta Tropic of Capricorn, magaaladu waxay ku raaxeysataa cimilo diiran iyo qorax badan, aasaaska ay u baahan tahay si ay u noqoto meel dalxiis loogu tago fasaxa jiilaalka.
Dad badan oo ku nool Woqooyi-bari Shiinaha iyo Ruushka ayaa ka baxsan doona qabowga xilliga qaboobaha ee Hainan fasax ahaan. Dadkani sidoo kale waa macaamiisheena mustaqbalka, ayuu yiri Zhuang.
"Zhanjiang maahan kaliya jasiirad waxayna awood u leedahay inay dalxiisayaasha u soo bandhigto noocyo kala geddisan oo firaaqooyin ah oo ka badan Hainan."
Iyada oo ay ku nool yihiin dad ku dhow 8 milyan, magaaladu waxay leedahay ilo shaqaale oo ku filan si ay u horumariso warshadaha dalxiiska ee aadka u xoogga badan, ayuu yiri Zhuang.
In kasta oo ay leedahay khayraad dalxiis oo qani ah, haddana Zhanjiang wali waxay soo booqataa tiro yar oo soo booqdayaal ah, gaar ahaan kuwa ka yimaada dibedda.
Dalxiisayaasha dibedda ee booqday Zhanjiang sanadkii la soo dhaafay waxay gaarayeen 90,000, halka 13.1 milyan oo dalxiisayaal ah ay yimaadeen guud ahaan. Saamiga dalxiisayaasha Shiinaha iyo kuwa ajaanibta ah waa 146-ilaa-1 oo ku yaal Zhanjiang laakiin celcelis ahaan qiyaastii 30-ilaa-1 inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalxiiska.
“Dhibaatada ugu weyn waxay tahay dhanka gaadiidka. Waxaan hogaamiye u nahay gaadiidka xamuulka ee mahada iyo xadiidka ku mahadsan, laakiin waxaan ka gaabinay dhanka rakaabka, ”ayuu yiri Zhuang.
"Ma lihin biraha xawaare sare leh, sidoo kale ma lihin hawo mareeno badan oo caalami ah."
Bishii Luulyo, Hu Chunhua, oo ah madaxa Xisbiga ee gobolka Guangdong, wuxuu ku dhawaaqay shir in dowladda gobolku ay maalgelin doonto 672 bilyan yuan ($ 110 bilyan) si loo dhiso gobolka horumarkiisa ku yaal ee galbeedka, bariga iyo waqooyiga, isagoo soo bandhigaya fursad dahabi ah magaalada.
"Aagga galbeedka, iyada oo Zhanjiang ay tahay magaalada ugu weyn, waxay diiradda saari doontaa hagaajinta kaabayaasha gaadiidka," ayuu yiri Zhuang.
Tareen xawaare sare ku xira magaalooyinka galbeedka Guangdong iyo Pearl River Delta ayaa la dhameystiri doonaa lana isticmaali doonaa sanadka 2016.
Safar ka imanaya Zhanjiang ilaa Guangzhou ama Shenzhen ayaa laga gaabin doonaa raacitaanka baabuurka ugu yaraan shan saacadood illaa laba saacadood oo tareen ah. Khubarada ayaa ka fikiraya dib u dejinta garoonka diyaaradaha ee Zhanjiang si ay u weyneyso awoodiisa, taasoo wadada u xaareysa in la sameeyo hawo-mareeno badan oo caalami ah.
Ma jiraan wax sumad u leh qoraalkan.
Singapore iyo Qatar safarka iyo xiriirka dalxiiska
Fasaxaaga cisbitaal Brazil ah
Lufthansa waxay dib u hawlgelisay Airbus A380